Dia tsy hohaintsika ve ny hanova ny politika ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsy dia fitia te-hamerimberina ity politika ity na fitia te-hiresaka politika fa na izany na tsy izany dia voatery ihany satria misy fanao tsy nahomby miverimberina. Misy ratsy zary fanao sy efa manjary fahazarana. Ilay politika mihitsy no very hasina ; ny politika anefa dia fomba natao hitantanana sy handaminana eo an-tanàna.
Fony fitondrana sosialista, rehefa nanomboka nihozongozona teto an-drenivohitra ny fitondran’Andriamatoa Ratsiraka dia nampiakatra tangalamena izy. Ny politikan’ny tranobe na ny hazomanga any ifotony, an’ireo olobe ireo anefa tsy misy ifandraisany amin’ny fanaon’ny antoko aty amin’ny foibe aty. Tato ho ato ireo ampanjaka any Vatovavy Fitovinany dia niseho fahitalavitra matetika na momba ny resaka faritra vaovao na ny fifidianana anteminieran-doholona. Zary atao fitaovana politikan’antoko ny tompon’andraikitra ara-drazana, nefa be ny raha tsy fantany. Raha azo novaina aza angamba ny jakimena dia efa namadika loko koa izy ireny. Izany no fomba fanapotehan’ny politika ny fiarahamonina any ifotony satria fividianana ny mahantra amin’ny vola 30 fahiny ihany izany.
Rehefa hidiran’ny politika ny zavatra samihafa dia simba, hoy isika. Ny fampidirana ny politika tsy araka ny tokony ho izy amin’ny zavatra samihafa anefa no manimba ny politika. Dia io no politika manimba ny zavatra maro eto amin’ny firenena, hany mitoetra. Natanjaka anie izany vehivavy Arema izany e ! Nitafy lamba mena anie izany eran’ny tanàna e ! Nandihy anie izany rehefa misy ny « oie, oie e ». Nifangaro ny antoko sy ny firenena ; nosalorana fitafy tsy an’ny tena na lahy na vavy na tanora na lehibe. Nandalo teo na maitso na manga. Dia io indray misy loko « orange » mameno ny rindrina sy trano samihafa. Dia nandihy anie ireo nitsena ny filoha tany Ambatondrazaka e ! Nisalovana aby anie ny vehivavy tany atsimo atsinanana nametraka faritra vaovao e. Mitafy « orange » aby anie ny bodo sy ny adala eny an-tsena e. Tsy ela akory anefa dia indro ireo « Andrianonibe sy ny Jakimena nirohotra, fa Vatovavy ihany no mety ho an’ny Antanala. Dia nihobihoby fahatany ny olobe. Ary dia ireto telo ireto sisa no mitoetra, ny loko, ny fitafy, ny fandihy, fa ny loko no lehibe indrindra.
Toy izay koa ny resaka fandriam-pahalemana. Ny lehibe, tompon’andraikitry ny filaminana dia nilaza fa misy olona voakarama manao dahalo, ary isaky ny manakaiky ny fifidianana dia mitranga ny tsy fandriam-pahalemana. Notondroiny aza ireo faritra hanjakan’izany manokana, toa an’Ambatondrazaka. Dia tsy maintsy fanasoketana ny mpifanandrina amin’ny tena ve no manazava ny tsy fahombiazana ? Nahoana raha fantatra ny fototry ny ratsy no tsy fongorina ? Maharary ny olona ao Ambatondrazaka anie ny kidnapping, zary fomba fiharian’ny tambajotran’ny ratsy eo an-tanàna e; teraka any ifotony ny tsikombakomba manabotry mpiray tanindrazana ! Maharary ny mpiomby omby anie ny very fananana fa dia mijery fotsiny ireo fiarabe miakatra ny renivohitra sady manana taratasy ara-dalàna no omby voadio sisa azony atao. Manjary fanadiovana ny maloto koa ny antoko sy ny politikany.
Mba rahoviana àry izany ny politika vao hiarina ? Rahoviana isika no afaka hanova ny fanao mba ho tena politikam-pampandrosoana ny tanàna no hajoro ? Rahoviana ny politika no tsy hisy loko ary tsy hitafiana akanjo tsy an’ny tena ? Rahoviana ny fihavanana no ho tarigetran’ny antoko politika liam-pahefana ? Rahoviana vao ho vitantsika ny mandresy ny ratsy amin’ny tsara, ka amin’izay dia mbola politika ihany no resahana, ary tena politika marina ? … Dia hoy aho aminao ry akama : mbola hisy ihany ny hanantena ny tsy misy, ary hisy hampanantena anefa indrisy ! hoy ny Nanahary izay !